WARBIXIN:Raila Odinga oo Garisa ka sheegay in Adan Barre uu ku caasiyay & Adan Barre oo Jawaab adag siiyay - Hablaha Media Network
WARBIXIN:Raila Odinga oo Garisa ka sheegay in Adan Barre uu ku caasiyay & Adan Barre oo Jawaab adag siiyay
HMN:-Hogaamiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee Kenya Raila Odinga ayaa weerar ku qaaday hogaamiyaha aqlabiyada barlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale.
Hogaamiyaha CORD Raila Odinga ayaa ka sheegay magaalada Garissa in Aadan Barre Ducaale uusan waxba aheyn markisiii hore isla markaana hogaamiyaha uu haatan yahay uu isaga ka dhigay.
Raila ayaa yiri ” Aniga ayaa shaqsi ahaan kasoo qaaday Ducaale oo kamid ahaa culimada iyo odayaasha Gaarisa oo ku taageeray inuu kusoo baxo deegaanka Dujis e uu barlamaanka kusoo galay, laakiin nasiib daro Ducaale waxaa uu noqday siyaasi weyn haatana waxaa uu kamid yahay kuwa i aflagaadeynaya ee iigu yeeraya inaan ahay magacyo badan oo xun, allah ayaana uga tagayaa waxaas oo dhan,”
Laakiin Ducaale ayaase si deg deg ah jawaab uga bixiyay eedeynta uga timid hogaamiyaha xisbiga Cord Raila Odinga, waxaana uu sheegay in arintaas aysan waxba ka jirin.
“Aniga ayuu isoo qaaday? Xagee ayuu iga soo qaaday? sanadkii 2007, waa aniga qofkii 10 Xildhibaan ku taageeray Xisbiga ODM kuwaas oo ka yimid gobolka Waqooyi Bari, waxaana ku taageeray Raila Odinga,” Ducaale ayaa sidaas usheegay wargeyska The Star
Waa hadaladii ugu xooganaa ee ay isweydaarsadaan labadan siyaasi kahor doorashada guud ee dalka Kenya ka dhaceysa sanadkan.
Ducaale ayaa dhanka kale sheegay in Raila ay ugu hanjabay inuu shaqada ka ceyrin doono kadib markii uu ku eedeeyay inuu lunsaday lacag dhan KSh 40 million taas oo aheyd lacag kasoo xarootay shirkad soo saarta Sokorta